Momba anay - Guangzhou Chengfeng Brother Industrial Co., Ltd.
fitsangantsanganana an-tsambo, firaisan-kina sy fandrosoana, fahamarinana ary tombony miaraka, fandraisana andraikitra!
kalitao, fahombiazana, sanda, olombelona
Fampidirana ny tantaran'ny orinasa
Ity anaran'ny marika ity dia fitambaran'ny anaran'ny mpanorina orinasa roa CHENG sy FENG izay teraka tam-pianakaviana. Ny logo dia manambatra ny inisialin'ny anarany ary modely ho endrika lolo. Ny dikany tiana hambara amin'ity logo ity dia ny 'manidina manana elatra mahery roa, miray hina ary miakatra mankany ambony hahazoana ilay nofy'. Ny lolo dia an'ohatra avy amin'ny larva ka miovaova endrika maro loko, avy amin'ny olitra miteraka lolo, avy amin'ny sarin-teny larva mankamin'ny lolo, mitohy ny tsingerin'ny fiainana. Izany dia maneho fa ny orinasantsika dia mitombo hatramin'ny kely ka hatramin'ny lehibe, ny dingana tsirairay fanavaozana antsika, ny fanavaozana ary ny fanoharana hatramin'ny taranaka fara mandimby, ary mivoatra maharitra isika.
Ity famolavolana LOGO ity dia avy amin'ny anarana iraisana amin'ny kaopy fitaratra sy whisky, ampiharina amin'ny marika amina andian-kaopy whisky. Ny litera 'G' dia natao mitovy amin'ny fijerin'ny sary tsy hita maso ny litera wisika litera voalohany sy hexagon. Taty aoriana noho ny fitomboan'ny tinady eo amin'ny tsena dia ampiharina izao fa tsy voafetra amin'ny marika tsy miankina amin'ny kaopy kafe, vera mena, vera misy ronono ary kojakoja fitaratra isan'andro. Ireo dia amidy sy amidy amin'ny alàlan'ny sehatra E-commerce an-tserasera.